२२ चैत्र २०७६ शनिवार,कस्तो छ तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् आजको राशिफल – Hamrosandesh.com
२२ चैत्र २०७६ शनिवार,कस्तो छ तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् आजको राशिफल
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ): नयाँ योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन मुस्किल पर्ला । स्वस्थप्रति सजक रहनु पर्नेछ । चोटपटकको भयछ सचेत रहनुहोला । बुधवारबाट सुन्दर पहिरनले ब्यक्तित्वमा निखारता ल्याउनेछ । इच्छा र आकाङ्क्षा पूर्ण हुनेछ । आकस्मिक धन लाभ हुनेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क १,९ र शुभरङ्ग रातो वा पहेंलो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि विष्णु भगवानको दर्शनगरी आरम्भ गर्दा लाभ मिल्नेछ ।
वृष (इ, उ, ए, ओ, वा, वि, वु, वे, वो): धर्म,कर्म तथा समाजसेवामा मन लाग्नेछ । दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने वेला छ । रोकिएका काम पुनः सुरु हुन सक्छन् । बन्धु बान्धव बाट सहयोग मिल्नेछ । धनार्जनका नयाँ स्रोतहरू पत्ता लाग्नेछन् । साताको मध्य भागमा आफूलाई कमजोर भएको अनुभूति हुनेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क १,४ र शुभ रङ्ग खैरो रङ्ग हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व भैरवजीको आरधना गरी यात्रा गर्नाले सफलता मिल्नेछ ।
मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, हा): आफन्तको सहयोग प्राप्त हुनेछ । समय निकै उत्साहजनक रहनेछ । सांस्कृतिक क्षेत्रमा रुची बढ्नेछ । रोकिएका अधुरा कामहरू पुरा हुनेछन् । मनोरञ्जनमा सहभागीता भइएला । बुधबारबाट प्रेममा बाधाका साथै बन्न लागेको काम विग्रनेछ । शैक्षिक क्षेत्र कमजोर रहनेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क ४,५ र शुभरङ्ग सुन्तलारङ्ग हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व दुर्गाजीको दर्शनगरी कार्य आरम्भ गर्दा सफलता मिल्नेछ ।
कर्कट (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो) : मनको डरले सताए पनि व्यवहारमा फाइदा हुनेछ । पारिवार सङ्ग रमाइलो भेटघाट हुनेछ । विशिष्ठ व्यक्तिको साथ पाईनेछ । धार्मिक तथा समाजसेवामा मन लाग्नेछ । मध्य सातामा मनमा निरासा र शरीरमा आलस्य आउला । सौन्दर्यतामा धन खर्च हुनेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क ३,८ र शुभरङ्ग पहेँलो वा घिउरङ्ग हो । शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि शिवजीको स्मरणगरी कार्य आरम्भ गर्दा अधिक सफलता मिल्नेछ ।
सिंह (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) : विपक्षीको छलकपट तथा जालझेलबाट सावधान रहनुपर्नेछ । अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्श गर्नु पर्ला । व्यवसायमा मन्दी आउनेछ । सोमवारबाट अनुहारमा कान्ति र मनमा शान्ति छाउनेछ । विपरीत वर्गप्रति आकर्षण बढ्नेछ । लामो समय देखि रोकिएको अधुरो कार्यले पूर्णता पाउनेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क ५,९ र शुभरङ्ग रातो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व विघ्नहर्ता गणेशजीको पूजा अर्चना गरि गरेको कार्यबाट सफलता मिल्नेछ ।
कन्या (टो, पा, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) : यो साता महिला वर्गबाट विषेश सहयोग मिल्नेछ । समाजिक कार्यमा मन जाला । राजनीतिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । कार्य सम्पादनमा सहजता मिल्नेछ । वित्तीय संस्थाबाट सहयोग पाईनेछ । दाजुभाइ, दिदीबहिनीले तपाईंका सकारात्मक विचारलाई समर्थन गर्नेछन् । यो साताका लागि शुभअङ्क २,९ र शुभरङ्ग कलेजी रातो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु अघि हनुमानजीको आरधना गरी यात्रा गर्नाले अधिक सफलता मिल्नेछ ।
तुला (रा, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) : मनमा शान्ति र अनुहारमा कान्ति छाउला । एकपछि अर्को अवसर आउनाले मन प्रसन्न रहनेछ । जोश जाँगर र हिम्मत बढ्नेछ । भोज भतेरमा सहभागी भईनेछ । वैदेशिक क्षेत्रबाटपनि सफलता मिल्नेछ । शुभ कार्यको लागि पारिवारिक समर्थन मिल्नेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क ६,८ र शुभरङ्ग नीलो वा पहेंलो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व शिवजीको स्मरण गरी कार्य आरम्भ गर्दा अधिक सफलता मिल्नेछ ।
वृश्चिक (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) : यो साता आफन्त र साथीभाइबाट सहयोग तथा हौसला प्राप्त हुनेछ । प्रेम जीवन सफल र सुखद् रहने देखिन्छ । शुभारम्भको चर्चा चल्नेछ । व्यापार व्यवसायमा सफलता पाईनेछ । साताको मध्यमा नियमको अनुशासनलाई बेवास्ता गर्दा अवसर र लाभ गुम्न सक्छन् । यो साताका लागि शुभअङ्क ३,८ र शुभरङ्ग सुन्तला वा सेतो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व महादेवको आरधना गरी आरम्भ गर्दा अधिक सफलता मिल्नेछ ।
धनु (ये, यो, भा, भि, भु, धा, फा, ढा, भे) : मनमा निरासा र शरीरमा आलस्य आउला । महत्त्वपूर्ण अवसर गुम्न सक्छ । स्वास्थ्यप्रति सजकता अपनाउनु होला । बुधवारबाट अनुहारमा कान्ति र मनमा शान्ति छाउनेछ । व्यवसायको सन्दर्भमा नयाँ नयाँ योजना बन्नेछ । पारिवारिक मनोरञ्जन र भेटघाट हुनेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क १,५ र शुभ रङ्ग गुलाबी या पहेंलो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व विष्णु भगवाको पूजा अर्चना गरि गरेको कार्य बाट अधिक सफलता मिल्नेछ ।
मकर (भो,जा,जि,जु,जे,जो,ख,खि,खु,खे,खो,गा,गि) : नजिकको मित्रसँग भेटघाट हुनेछ । प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनुका साथै दाम्पत्य सुखमा रमाउने समय छ । चिताएको कामले तीव्रता लिनेछ । धनार्जनका नयाँ स्रोतहरू पत्ता लाग्नेछन् । राजनीतिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । शत्रुपनि क्षय होलान् । यो साताका लागि शुभअङ्क २,७ र शुभरङ्ग सेता वा घिउरङ्ग हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि भैरवजीको ध्यान गरी कार्य आरम्भ गर्दा शुभफल प्राप्त हुनेछ ।
कुम्भ (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, दा) : विशिष्ट व्यक्तिको सहयोग पाईनछ । व्यवसायको सन्दर्भमा नयाँ योजनामा पुनर्विचार हुनेछ । सामाजिक तथा धार्मिक कार्यमा रुची बढ्नेछ । आँटेको र ताकेको कार्य पुरा हुनेछ । साताको अन्त्यमा स्वास्थ्य प्रतिकूल हुनसक्छ । अतस् स्वास्थ्य प्रति सचेत हुनुपर्छ । यो साताका लागि शुभअङ्क ३,७ र शुभरङ्ग ध्वाँसे वा घुर्मैलो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि वरुण भगवानको स्मरणगरी कार्य गर्नाले अधिक सफलता मिल्नेछ ।
मीन (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, चा, चि) : यो साता कला र गलाको प्रभाव बढ्नेछ । कूटनीतिक नियोगको सहयोग मिल्ने देखिन्छ । सामाजिक कार्यमा मन जानेछ । साताको उत्तरार्धबाट घर व्यवहारको समस्याले सताउनेछ । प्रतिद्वन्दी हरुले कार्यमा अवरोध ल्याउनेछन् । स्वास्थ्य प्रति सतर्कता अपनाउनु पर्छ । यो साताका लागि शुभअङ्क २,६ र शुभरङ्ग वैजनी वा घिउरङ्ग हो । शुभकर्म गर्नु पूर्व भगवतीको दर्शनगरी कार्य आरम्भ गर्दा अधिक सफलता मिल्नेछ ।